Martech Zone: Laharana faha-1 amin'ny Technorati | Martech Zone
Martech Zone: Laharana faha-1 amin'ny Technorati
Asabotsy, Aogositra 4, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Nandatsaka mailaka tany amin'ireo olona mahafinaritra tao Technorati aho androany maraina ary nampahafantatra azy ireo fa mety manana olana izy ireo. Ny olana? Martech Zone laharana faha-1 ao amin'ny Technorati. Ok… tsy dia…… hoy ny # 1, fa tsy ao amin'ny lisitra Top 100 aho.
Fanamafisana ny olana - John Chow laharana faha-1 ihany koa ao amin'ny Technorati.
UPDATE: Toa efa voavaha ny olana minitra vitsy lasa izay raha nanoratra ny lahatsoratra.
Google Adsense ho an'ny sakafo
4 Aogositra 2007 à 8:29
Ah – fotoana mampalahelo teo amin'ny tantaran'ny bilaogiko izany rehefa very ny laharana faha-1 ahy. Nanao ahoana ny fahatsapana ho #1 androany? 🙂
4 Aogositra 2007 à 9:41
Manontany tena aho hoe firy amintsika no nizara amin'izao fotoana izao! Nahafinaritra izany!
Aug 6, 2007 amin'ny 11: 00 AM
Eny–sendra tratrako ny fotoanan'ny voninahitrao! Manantena fa hitranga indray izany - amin'ny manaraka!
6 Aogositra 2007 à 12:13
Fanavaozana avy amin'ny Technorati: